Banyere Anyị - Wuxi CRE New Energy Technology Co., Ltd.
Wuxi CRE New Energy Technology Co., Ltd bụ ọsụ ụzọ na imewe, mmepe na
mmepụta ihe nkiri capacitors na China.Anyị nwere obi ụtọ na anyị nwere ikike, ịdị uchu na
raara onwe ya nye imewe na mmepe otu.
Ọhụụ na Nkwupụta Ozi
Agbanyelarị ụkpụrụ ụlọ ọrụ n'ime mkpịrịsị ya (CRE) nke na-anọchite anya ntinye aka, nkwalite na ọkaibe.
Ọhụụ anyị bụ ịnye ihe ngwọta ọhụrụ maka obodo zuru ụwa ọnụ iji jikọọ na ụwa eletrọnịkị nke na-apụghị izere ezere na nke na-agbanwe agbanwe n'ọdịnihu.
Ebumnuche anyị bụ ịbụ otu n'ime ndị na-ebubata capacitor a ma ama ma n'ime ụlọ ma na mba ụwa.
CRE abụrụla onye na-eweta ihe nkiri nke metalized capacitors kemgbe 2011, na-ebuga azịza ntụkwasị obi na ọkachamara maka ngwa elektrọn ike;ịbanye n'ime mpaghara dị iche iche gụnyere akpaaka ụlọ ọrụ na nchekwa ike, ọkụ eletrik, njem ụgbọ oloko, ụgbọ ala eletrik na ike ọhụrụ na-adigide.Ngwọta ntụkwasị obi, ịdị mma na kachasị mma nke ahaziri maka ndị ahịa anyị bụ ihe kacha anyị mkpa mgbe niile.
A na-enye ngwaahịa dị iche iche nke capacitor maka PV / ikuku ike inverter, ndị na-egwupụta akụ, usoro ike traktị ụgbọ oloko, EPS, UPS, APF, SVG, isi iyi ọkụ pụrụ iche, njikwa ike / nnyefe, sistemu ebugharị, E-ụgbọ ala wdg. A na-etinyekarị maka DC-Link, IGBT snubber, resonance dị elu, njikọta na nzacha AC.
Ugbu a, CRE nwere ihe karịrị 20 patent ma kwadoro ya site na Quality Management System ISO9001 na TS16949 na UL nchekwa nzukọ.
Ndị ahịa, ndị mmekọ na ọdịnihu
Ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ ahụ na-ejere ndị ahịa ozi n'ụlọ, ma CRE na-emepụta ngwaahịa maka ụlọ ọrụ n'ụwa nile.
Na 2016, CRE bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nkwekọrịta nkwekọrịta na DKE, German Commission for Electric, Electronic & Information Technologies nke DIN na VDE.E hiwere ERC maka ngwa eletrọnịkị maka ebumnuche R&D.
Wuxi CRE New Energy na-atụ anya isonyere ndị mmekọ dabara adaba n'ụwa niile.Ọnụ, anyị ga-eduga n'ihu ngwa nke film capacitors na ngwá electronic ubi, na-enye aka na mmepe nke gburugburu ebe obibi-enyi na enyi ike ọhụrụ na mma na-ejere ndị ahịa anyị ozi n'ụwa nile.